'Golaha wakiillada 'Somaliland' oo iska fogeeyay in uu qayb ka yihiin eedaha loo haysto Coldoon
Saturday December 04, 2021 - 11:47:29
Mid kamida golayaasha uu ka koobanyahay maamulka isku magacaabay 'Somaliland' ayaa ku dhawaaqay in uusan wax dacwad ah uqabin Nin samafale saxafi ah oo muddo bila ah ku xiran xabsi kuyaal magaalada Hargeysa.
Saxafi Cabdimaalik Muuse Coldoon ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay xabsiga ku jiray ka dib markii uu wax ka qoray baadariyad diinta kiristaanka fidisa oo la yidhaa Joy Isa islamarkaana ahayd guddoomiya Jaamacadda Barwaaqo, Saxafiga ayaa loosoo bandhigey eedihii loo haystey maalmihii ina dhaafey.
Eedaha saxafiga loo haysto ayaa lagusoo koobay shan qodob oo uu mid kamid ahi sheegayay in ‘Golaha Wakiillada ee Somaliland’ uu dacwadda qayb ka yahay.
Warqad ka soo baxday ‘Golaha Wakiillada ee Somaliland’ islamarkaana uu ku saxeexnaa Guddoomiyaha golaha Cabdirasaaq Khaliif ayaa sheegaysa in aaney qayb ka aheyn dacwadda loo haysto samafale Cabdimaalik Coldoon.
Haddaba eedaymahan loo haysto saxafiga ayaa isugu soo ururay kuwo lagu difaacayo dugsiga Abaarso iyo baaderayad Joy Isa ee u dhalatey waddanka Nayjeeriya islamarkii la ogaadeyna degdeg uga dhooftay gegidda diyaaradaha magaalada Hargeysa.
Jaamacadda Barwaaqo ayaa farac ka ah shabakadda Abaarso oo ah dugsi uu aas aase ka yahay Jonathan Star oo Mareykan ah laakiin asalkiisa lagu sheego Yahuudi.
Waxa kale oo xusid mudan in dugsiga Abaarso uu horay u martiqaadey ninka u ololeeya isu tagga dadka isku jinsiga ah oo la yidhaa Anderson Cooper.
Warka kasoo baxay 'golaha wakiillada' maamulka Somaliland ayaa eedaha loo heysto saxafi Cabdi Maalik ka dhigaya kuwa aan tabar badnayn waxaana larajeynayaa in waqti dhow xabsiga lagasii daayo.
W/Q Wadaada Yare Xaashi
Khilaafka ka soo cusboonaadey doorashooyinka Maamulka 'Somaliland'.
Maxay iska shabbahaan Nuur Cadde iyo RW Rooble? [Warbixin].
Wariye Coldoon oo markii ugu horraysay si cajiib ah uga hadlay maxkamadda Hargeysa horteeda.
Weerar 4 Askari lagu dilay oo ka dhacay Saldhigga AMISOM ee deegaanka Carbiska iyo warar kale.
Rooble "Taliyaasha ciidamada waa in ay ka amar qaataan xafiiska R/wasaaraha".